सिभिल बैंक खाता खल्तीमा लिङ्क गर्दा रु. १०० बोनस र स्मार्टफोन उपहार « Sansar News
सिभिल बैंक खाता खल्तीमा लिङ्क गर्दा रु. १०० बोनस र स्मार्टफोन उपहार
२ माघ २०७८, आईतवार १०:२०
२ माघ, काठमाडौँ । अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी खल्तीले सिभिल बैंक खाता खल्तीसँग लिङ्क गर्ने प्रयोगकर्ताहरुका लागि रु। १०० बोनस अफर ल्याएको छ । साथै, हरेक महिना एक जना भाग्यशाली प्रयोगकर्ताले सामसुङ स्मार्टफोन जित्ने छन्।
यो बोनस अफर पहिलो पटक सिभिल बैंक अकाउन्ट खल्तीसँग लिंक गर्ने प्रयोगकर्ताहरुको हकमा मात्र लागु हुन्छ । प्रयोगकर्ताले लिंक गर्न अगाडी केवाईसी भेरिफाइ गराउन पर्नेछ। केही सेकेण्ड मै आफ्नो बैंक लिंक गरी उक्त लिंक गरिएको सिभिल बैंक अकाउन्टबाट खल्तीमा बिना लोड भुक्तानी तुरुन्तै गर्न सकिन्छ ।
एक पटक प्रयोगकर्ताले बैंकलाई लिङ्क गरेपछि, यो सेवाले उनीहरूलाई वालेट लोड नगरी केही ट्यापहरूमा पानी, इन्टरनेट, बिजुली, सरकारी राजस्व र अन्य उपलब्ध सेवाहरू जस्ता बिलहरूको भुक्तानी गर्न सहज बनाउँछ । रु. १०० बोनस अफर पौष ३० देखि फागुन १ सम्म लागु हुनेछ ।